खुलामञ्च लुट्ने कसलाई देखे बाबुरामले सत्तासिन मतियार ? - Nepal's Digital News Paper
खुलामञ्च लुट्ने कसलाई देखे बाबुरामले सत्तासिन मतियार ?
‘ऐतिहासिक खुलामन्च भूमाफिया र तिनका सत्तासीन मतियारहरूले हाकाहाकी लुट्नु जघन्य अपराध र देशद्रोह हो’, सामाजिक सञ्जालमा भट्टराईले लेखेका छन् ‘अपराधीलाई पाता कसौं, खुलामन्चलाई खुला गरौं ।’
भटराईले खुल्ला मञ्च लुट्नमा सत्तासीन मतियारहरुको हात रहेको बताएका छन् । तर सत्तासीन मतियार को हुन ? भट्टराईले किटानी नाम भने बताएका छैनन् । उनले खुल्ला मञ्च सत्तासीनको आडमा लुटिएको आशंका भने गरेका छन् । एउटा ठेकेदार कम्पनीले सत्तासीनको आर्शिवाद नपाएसम्म यति ठुलो अपराध गर्न नसक्ने उनको दावी छ । काठमाण्डौलाई प्राणवायु प्रदान गर्ने र जनतालाई लोकतान्त्रिक अधिकार प्रत्याभूत गर्ने खुल्ला मञ्च सत्तासीन मतियारकै आडमा लुटिएको भट्टराईले बताएका छन् ।